MPANJAKA TSIMIARO III : Tontosa ny zoma teo ny tsangan-tsaigny andiany fahafito
Fomba iray nentim-paharazan’ny foko Antakarana hajainy ary mbola voatazona hatramin’izao ny Tsangatsaigny na « cérémonie du couronnement du mât royal » izay tanterahina ao Ambatoharagnana. 24 novembre 2019
Isaky ny 5 taona no anaovan’ny ampanjaka Antakarana azy ka ity ny Tsangatsaigny faha 7 nataon’ny mpanjaka Tsiamiaro faha III, raha ny taona 1987 no nananganany saina voalohany. Tsiahivina eto fa ny taona 1697 no nanatanterahana ny tsangatsaigny voalohany tao Ankarabe, izay nataon’ny ampanjaka Andriatsirotso, izay nitondra an’ Ankarabe ny taona 1692-1710. Raha natao ny kajy dia 322 taona izay no nisian’ny Tsangatsaigny.
Mpanjaka miisa 11 araka izany no efa nifandimby nitondra ny fanjakana Antakarana ity hatramin’ izao raha ampanjaka Kozobe no nitondra ny fanjakana Antakarana voalohany ny taona 1609-1639. Raha ny faritra fehezin’ny ampanjaka kosa dia i Babaomby any amin’ny tapany avaratra, Tetezambato any atsimo, Bemarivo ao amin’ny faritra Sava any atsinanana, ary Nosy Mitsiho any andrefana. Ny fanazavana nentin’ny fahatelonn’ny mpanjaka Tsimiaro III, Solo Robert, no nahafantarana fa ny Tsangatsaigny dia manambara ny fitondran’ny mpanjaka, entina hanambarana ihany koa fa mbola manjaka ny mpanjaka amperin’asa ary manana fahefana feno amin’ny vahoakany.
Maro ireo dingana tsy maintsy arahina
Maro ireo dingana sy ny fombafomba tsy maintsy arahina amin’ny fanatanterahana ity fombandrazana Tsangatsaigny ity. Manomboka « Mijilo » na mitady ilay hazo any anaty ala, io no atao hoe : hazoambo. Rehefa tapaka ity farany dia antsoina hoe hazo manjaka. Ao anatin’ny iray volana katroka no anaovana ity asa tsangatsaigny ity.
Manomboka amin’ny « Mijilo » hazoambo hatramin’ny fananganana ny saina. Raha miala any Antsahamahavelogno kaominina ambanivohitra Beramanja toerana nakana ilay hazo manjaka dia lalana 22 km no andehanana anaovana dia an-tongotra amindrana ilay hazo manjaka any Ampasibe ao Ambilobe eny amin’ny sisin’ny reniranon’i Mahavavy. Rehefa tonga ao Ampasibe ny hazo manjaka dia misy ny fombafomba tsy maintsy atao amin’ilay toerana ary efa olona efa voafidy na ireo razan’olona voatendry no manao izay. Ohatra ny mpijoro toerana dia ireo razan’olona avy ao Sengaloko no manana andraikitra amin’izany , ka andro sabotsy no anaovana ny joro. Ao koa ny tompon’ny omby anaovana ny ventikabary dia ireo avy any Matsaborikilandy sy ireo razan’ olona mikoja saina ka anisan’izany ireo mpandrafitra ilay hazo manjaka izay mizara roa vavy sy lahy sy mampivady na manambatra ireto farany ho iray. Marihina fa atao mahitsy sy malama tsara ilay hazo manjaka ary ao Ampasibe no hanaovana izany rehetra izany
Misy ny fady sy fomba izay tsy maintsy hajaina
Amin’ny fanatanterahana ity fomba fananganana saina ity dia maro ny fady tsy maintsy arahin’ny tompon-drazana na koa ny vahiny izay hijery ny fanatanterahana azy. Anisan’izany ny tsy fanaovana kapa na kiraro manodidina ny faritra misy ny zomba, ny haramanja fa indrindra raha hikasika ny hazo manjaka. Ny vehivany dia tsy maintsy mitaly na mirandrana ary mila mitafy na misikina kisaly. Tsy azon’ny vehivavy tonga fadimbolana atao ny miatrika ny tsangantsaigny. Ny lehilahy dia tsy mahazo manao satroka ary tsy maintsy manao kitamby na lambaoany. Azon’olona rehetra jerena ny tsangatsaigny, fa saingy izay tonga kosa dia tsy maintsy manaraka ny fomba ary tsy afaka mitsabatsabaka amin’ny fandaminana ataon’ny tompon’ny fomba . Raha tsy izay dia mihatra avy hatrany ny sazy avy amin’ny tompondrazana na ny antsoina hoe mosarafa . Raha « mibozy » ny hazo manjaka na hoe mibata na koa milanja hazo manjaka dia ny razan’olona anti-mahatera no milanja azy voalohany vao afaka mifandimby amin’izay ny vahoaka rehetra izay tia sy vonona hanaraka ny fombafomba rehetra.
Lalana naleha namindrana ny hazo manjaka
Raha « nirotsy » na natory tao Antsaravibe ny hazo manjaka dia namindra niakatra ny tanànan’ Ampisikina izay toerana eny amin’ny tapany atsimo ny tanànan’Ambataoharagnana ihany. Eo no « mirojo » ny hazo manjaka ny alin’ny alakamisy. Nandro na « nampisehagna » tamin’io toerana io ny hazo manjaka alohan’ny hiakarany amin’ny doany na ny toerana anaovana ny asa. Nanomboka ny marainan’ny zoma dia efa maresaka ny tanàna satria misy ny atao hoe Rebika na dihy nentim-paharazana izay tsy maintsy atao amin’ny asan’ny ampanjaka. Ka efa misy olona ihany koa no voatokana manao izay , ka ny hazolahy no ampiasaina mibaiko ny fihetsiky ny mpirebika. Ny razana zafin’ny fotsy sy ny zafin’ny mena no manao izay ary fitafy mampiseho ireto razana ireto no atao.
Tamin’ny 1 ora sy 17min no tafatsangana ny saina
Rehefa tonga eo amin’ny doany ny hazo manjaka dia efa misy rafitra eo amin’ny foko Antakarana hikarakarana izany. Ireo ragnitsy no voasafidy hanao izany. Ragnitsy no ilazana ireo mpanolotsain’ny mpanjaka ka ahitana fahatelo, rangahy, manantany. Refeha tafatsangana ny hazo manjaka dia misy ny razan’olona mianika ny hazo manjaka. Raha ny fanompohana natao ny zoma teo dia olona roa no niezaka nianika ity farany.
Ny voalohany dia tsy nahatafita ny fampiakarana saina fa ny faharoa no nahavita izany. Tsy sambany nisy izany hoy ny mpahay fombandrazana Antakarana tamin’ny fanatanterahana ny Tsangantsaigny. Tokony tamin’ny 1ora sy 17minitra no « tombo » na tafatsangana tanteraka ny saina. Taorian’izay ho mariky ny fanjakany dia nentina, nolanjaina in-6 mihodidina ny saina ny mpanjaka Tsimiaro III. Io no fotoana hanolorana ny mpanjaka ny asa vita, ary eo koa izy mandray azy ampahibemaso. Olona avy amin’ny lafy valon’ny Nosy sy avy any ivelany no hita niatrika ity Tsangantsainy ity.